Nyanzvi munyaya dzezvehutano dziri kuyambira vanhu kuti vasangonwe, kuputa kana kunatira mimwe mishonga pasina ongororo yakadzama kuti zvinobatsira kana vachinge vabatwa nechirwere cheCovid-19.
Sezvo vakawanda vari kutya kufa nechirwere cheCovid-19 icho chouraya vanhu vakawanda pasi rose, vanhu vave kutsvaga chero nzira dzavanofuna kuti dzingavabatsire nedzimwe dziri kunzi nenyayanzvi munyaya dzezvehutano dzinogona kukanganisa hutano. Imwe nzira iyi kufemba bute.
Mutungamiriri wePrivate Medical and Dental Practitioners Association, Dr Johannes Marisa vati bute rinotokanganisa nzira dzemhepo rikafemwa. VaMarisa vaudza Studio 7 kuti parizvino hapana humbowo hunoratidza kuti bute rinobatsira vakatiwo bute harigoni kugadzirisa zvinokanganiswa neCovid-19 mumuviri yevanhu.
VaMarisa vatiwo kushandiswa kwenzira dzechivanhu neveruzhinji kuri kukonzerawo kuti vanhu varere chirwere cheCovid-19 vari kumba izvo zvinozoita kuti vazoenda kuchipatara nguva yapera.
Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vanachiremba vose munyika, reZimbabwe Medical Association (Zima), Doctor Kudzai Masinire avo vatiwo zvinosuwisa zvakanyanya kuti vanhu vave kungoudzana zvinhu zvemanyepo mukuedza kurwisa denda reCovid-19.
VaMasinire vatiwo manyepo kuti bute ringapedza dambudziko reCovid-19 vakatiwo pane mimwe mishonga yakawanda iri kutengeswa pasina humbowo hwekuti inobatsira pachirwere ichi.
Vachitaurawo nezvenyaya yekunatira iyo vanhu vari kukurudziranawo zvakare pamadandemudande kunyanya eWhatsApp nyanzvi idzi dzatiwo kunyangwe hazvo kufukira kwakabvira kare kuchiitwa senzira yekudzivirira dzihwa vatiwo nzira iyi iri kukonzerawo matambudziko. VaMarisa vati vanhu vari kunyanyofukira zvakanyanya izvo zvokonzera kuti vamwe vatsve.
VaMasinire vatiwo vamwe vanhu varikufukira vakasanganisa mvura nemimwe mishonga yakasiyana-siyana vachiti izvi zvinogona kukonzerawo kuti vamwe vakanganisike muzvipfuva. VaMasinire vatiwo kusvika parizvino hakuna tsvakurudzo inoratidza kuti kufukira uku kunobatsira paCovid-19.
Asi imwe nyanzvi munezvehutano, Dr Peter Mataruse vaudzawo Studio 7 kuti nzira yekunatira yakabvira kare ichishandiswa vakatiwo zvikaitwa zvinemwero havaoni pane dambudziko.
Nemusi weChishanu mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezvehutano VaConstantino Chiwenga vakati zvinogona kuve zviri zvechokwadi kuti pane mishonga yechivanhu inobatsira padenda reCovid-19 asi vakati zvinoda tsvakiridzo yakakwana vakati bazi ravo rine bandiko ririkuita tsvakurudzo nemishonga iyi.
Mimwe mishonga irikushandiswa nevanhu pakufukira inosanganisira zumbani, moringa, mufandichimuka nezvimwewo.
Asi vanachiremba vose vari kutenderana kuti nzira chaiyo parizvino yekusabatwa nechirwere ichi kusasangana neveruzhinji, kugeza maoko nesipo nemasanitiza uye kupfeka mamask sezvo munyika musati mave nenhomba yekurapa chirwere cheCovid-19.